Masaajid labaad oo Gaalkacayo ku yaal oo dableey hubaysani weerareen | raascasayrmedia.com
← Gudoomiyaha baarlamaanka Mudane Shariif Xasan oo ku soo laabtay Muqdisho kana war bixiyay shirki Nairobi
Wasaaradda arimaha gudaha oo amar kasoo saartay banaanbaxyada →
April 17, 2011 · 3:41 pm
Masaajid labaad oo Gaalkacayo ku yaal oo dableey hubaysani weerareen
Dabley hubaysan ayaa saakay weerar sababay dhimasho iyo dhaawac mar kale kale ku qaaday Masjid ku yaala Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta gobolka Mudug.
Dabley hubaysan ayaa saakay weerar ku qaaday mid ka mid ah Masjida ku taala Woqooyiga Magaalada Gaalkacyo islamarkaana lagu magacaabo Al-Faaruuq kaasi oo ku yaala Xaafadda Garsoor ee Magaalada Gaalkacyo.
Dabaleyda ayaa la sheegay in weerar culus ay ku qaadeen gudaha Masjidka, iyagoo ku dilay hal qof halka labo kalena ay ku dhaawaceen kuwaasi oo dhamaantooda ahaa dadkii ku Dukanayay Masjidkaasi sida uu Idaacadda Shabelle u xaqiijiyay mid ka mid ah dadka deegaanka ah.
Wararka naga soo gaaraya gudaha Masjidkaasi ayaa waxaa ay sheegayaan in dableydii hubaysneyd ay sii wateen ilaa dhowr Wadaad oo Salaaddii Subax ku Dukaday Masjidkaasi kuwaasi oo ilaa iyo iminka aan la garanayn halka ay la’aadeen.
Hase ahaatee intaasi ka dib ayaa Ciidamada Booliska ee Maamulka Puntland waxaa ay gaareen Masjidka rasaasta lagu furay, iyagoo halkaasi ka bilaabay howlaglo xoogan oo ay kui baadi goobayaan kooxihii ka dambeeyay weerarkaasi inkastoo aysan u suurta galin inay gacan ku dhigaaan dableydii ka dambaysay weerarkaasi.
Falkaani lagu rasaaseeyay saakay Masjid ku yaalla Xaafadda Garsoor ee Magaalada Gaalkacyo ayaa kusoo beegmaya waxyar kadib markii habeenimadii xalay weerar culus lagu qaaday Masjidka Salaaxu diin oo isna ku yaala Woqooyiga Magaalada Gaalkacyo kaasi oo sababay dhimashada 4-ruux iyo dhaawaca 11-kale taasi oo ay walaac xoogan ka muujiyeen waxgaradka ku dhaqan gobolkaasi.